प्रशासनले व्यवहार सच्याउनुपर्छ ः क्षेत्री
By vijayafm on	 August 28, 2019 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
होटल व्यवसायीहरुको हकहित र संरक्षणका लागि क्रियाशील मुकुन्दसेन मौलाकालिका होटल व्यवसायी संघ गैंडाकोटमा झन्डै तीन सय होटलहरु आबद्ध छन् । यही संघको सातौं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा हरि क्षेत्री चयन हुनुभएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टमा केही विकृति आइरहेको आम नागरिकको भनाइ छ । अर्कोतर्फ होटल व्यवसायीहरुले भने ट्यापेमुन्द्रेहरुले व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको, प्रहरी प्रशासनले व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन खोजेको जस्ता आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही चुनौतीका बीच मुकुन्दसेन मौलाकालिका होटल व्यवसायी संघ गैंडाकोटको अध्यक्षमा हरि क्षेत्री चयन हुनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरि क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, विजय खबरका लागि जनसम्पर्क अधिकारी तिलक सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
हरि क्षेत्रीज्यू सर्वप्रथम यहाँलाई बधाइसँगै विजय खबरमा स्वागत छ ।
यो अवसर प्रदान गर्नुभएकामा तपाईंलगायत विजय खबर पत्रिकालाई धन्यवाद ।
निकै चुनौतीका बाबजुद अध्यक्ष बन्नुभयो होइन ?
हो, यो क्षेत्रमा चुनौती छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्टमा विकृति आयो भनेर आम नागरिकले भनिरहेको अवस्था छ तर हामीलाई ट्यापेमुन्द्रेहरुले दुःख दिने गरेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीको सहयोगमा केही तह लगाइयो । प्रहरी प्रशासनले व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन खोजेका छन् । बेलाबखतमा छापा मार्ने, होटलअगाडि नै मापसे चेकजाँचजस्ता कार्यले हामी आजित छौँ ।
अब प्रहरीसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
हाम्रो मुख्य साझेदारी हुनुपर्ने प्रहरी प्रशासन हो । होटल व्यवसायी अहिले उही प्रशासनसँग पीडित छन् । हामीले पनि नेपाल सरकारको नीति, नियम र कानुनभित्र रहेर सञ्चालन गरेका छौँ । राज्यलाई राजस्व तिरेका छौं । व्यवसायका तर्फबाट कमजोरी भए हामी सुधार्न तयार छौँ तर अनावश्यक दुःख नदिन प्रशासनसँग आग्रह गर्दछु । होटेल व्यवासायको र प्रशासनको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो ।
होटल व्यवसायलाई अझै मजबुत गराउन कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
म गैंडाकोटलाई नै जन्म थलो र कर्म थलो बनाएको मान्छे हो । यहाँको सुखदुःखमा हरेकलाई साथ दिने गरेको छु र यहाँको अवस्थाबारे थोरबहुत बुझेको छु । अझै लामो समयसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सम्पूर्णको मायाले दुईवषीय कार्यकालको जिम्मेवारी थपिदिनुभएको छ । यो पूरै दुई वर्षको समय व्यवसायीसँगै हुनेछु । व्यवसायीलाई परेको सुख र दुःखमा रहने छु । सबैभन्दा पहिले त पर्याप्त मात्रामा होटल व्यवसायलाई आवश्यक र पुग्ने गरी विद्युत् दिन नगरसँग माग गर्छु । नगरपालिकासँग एउटा सहमति नै गरेर गैंडाकोट नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरपालिकाका रुपमा चिनाउने छु र मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हुनेछ । गुणस्तरीय खाना, खाजा र आरामदायी वासको उचित प्रबन्ध भए व्यवसायलाई कहिल्यै असर नहुने हुँदा यसका लागि कदम चाल्नेछु ।
पूर्वपश्चिमको मध्य भाग भएकाले गैंडाकोट यात्रुका लागि सहज र खाना खाने स्थानका रुपमा विकासी हुँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महŒवपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । यो गर्वको कुरा हो । यस क्षेत्र देशकै मध्य भागमा नारायणी नदी, मौलाकालिका मन्दिर, खुल्ला ठाउँ, उत्पादनमुखी जमिन यस्तै सबै मिलेको ठाउँमा अन्तरिक तथा बाÞय पर्यटकका लागि राम्रो ठाउँ हो । यसको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने छ । यो क्षेत्रकै उत्पादन यसै क्षेत्रमा खपत भयो भने नगर छिट्टै समृद्धिको बाटोतिर उन्मुख हुने छ । यहाँको हाइजेनिक परिकार खुवाउने मेरो अर्को लक्ष्य रहेको छ ।
राजमार्गका होटलको खाना गुणस्तरहीन छ भन्ने आलोचना भइरहन्छ नि ?
त्यस्तो सबै होटलमा पक्कै भएको होइन । केही व्यवसायीले गर्दा सम्पूर्ण होटल व्यवसायीको बदनाम भइरहेको छ । त्यस्ताखाले सूचना पाए हामी संघको नियमअनुसार कारवाही हुनेछ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब हामीले अनुगमनलाई पनि तदारुकताका साथ अघि बढाउने छौं र यसलाई व्यस्थित गर्नेतर्फ लाग्छौं । त्यस्तो तलमाथि परेका खण्डमा संघको नियमअनुसार कारवाही हुने हुँदा सञ्चार मध्यमलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गदर्छु । अनुगमन खानामात्र नभई कर्मचारी कस्तो प्रकारको राखेको छ ? कत्तिको सफा राखेको छ ? पाहुनाको अभिलेख कस्तो प्रकारले राखेको छ ? लगायतका विविध पक्षमा रहेर अनुगमन गर्नेछौँ ।
तपाईं अनि विजय परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ । फेरि पनि होटल व्यवसायी साथीहरुलाई मर्यादित र नियमानुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै हाम्रो संघमा करिब ३०० होटल छन् । यी संघअन्र्तगत रहेका होटलहरुको क्षमतावृद्धिका लागि विभिन्न तालिम प्रदान गर्नेछौँ। हस्पिटालिटी, गुणस्तरीय खाजा, खाना र आरामदायी वासको व्यवस्थासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नेछौँ । विभिन्न गोष्ठी सञ्चालन गर्दै गैंडाकोटलाई वातावरणमैत्री होटल सञ्चालन तथा पर्यटन विकाससम्बन्धी टेवा पु¥याउने खालका कार्यक्रम लिएर आउने छौं । यस कार्यमा प्रहरी प्रशासनलगायत सम्पूर्णको सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद ।